Madaxweynaha Somaliland iyo waftigii ku wehelinaayeyOo Socdaal shaqo ugu Kicitimay dalka Maraykanka | Salaan Media
Madaxweynaha Somaliland iyo waftigii ku wehelinaayeyOo Socdaal shaqo ugu Kicitimay dalka Maraykanka
Hargeysa (SM)- Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo weftigii uu Hoggaaminayay ee maalmahanba ku sugnaa magaalada London ee dalka Ingriiska ayaa maanta socdaal shaqo ugu kicitimay dalka Maraykanka gaar ahaan Magaalada Washington.
Wasiirka Arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ka hadlayay socdaalkooda Maraykanka waxa uu yidhi “Waxa Weftigii Madaxweynuhu Hoggaaminayay aanu u baxaynaa safar shaqo oo aanu ku tagayno dalka Maraykanka, gaar ahaan magaaladda Washington.waxaanu halkaasi filaynaa inuu madaxweynuhu kula kulmo masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Maraykanka iyo Congress-ka iyo Hay’adaha kale ee xaga horumarka iyo maal-gashiga ee dalka Maraykanka.”
“Waxaanu filaynaa in Booqashadaasi ay midho-dhasho oo ay ka mid noqoto guulihii safarkii madaxweynuhu ku soo maray dalalka Turkiga, Imaaraadka carabta iyo Ingiriiskaba inaanu Maraykankana ka sii ambo-qaadno oo arrimo faro badan oo dalka iyo qarankuba u baahan yahay aanu kala hadalno,”ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdilaahi.
Wasiirka Khaarajigu waxa uu intaasi ku ladhay “Waxa kale oo mudada aanu halkaasi joogno rajaynaynaa inuu Madaxweynuhu ka hadlo oo uu khudbad ka jeediyo meel ka mid ah meelaha waaweyn ee magaalada Washington gaar ahaan Hay’adaha aaraada caalamka lagaga hadlo oo arrimaha horumarka iyo arrimaha qaranka horyaala ee u baahan in laga gudbo.”
Weftiga madaxweyne Axmed Siilaanyo ee socdaalka ugu kicitimay dalka Maraykanka waxa ku weheliya Wasiirrada arrimaha dibadda iyo Madaxtooyadda iyo marwada koowaad ee Somaliland.